Mira kuvanda kubva kune vatengi vako
Mira Kuhwanda kune Vako Vashanyi
Muvhuro, September 13, 2010 Svondo, October 4, 2015 Michael Reynolds
Izvo zvichiri kundishamisa kuti mangani makambani anovanda kubva kune vatengi vavo. Ini ndanga ndichiita tsvagiridzo svondo rapfuura pane vanogadzira maapplication eApple nekuti ini ndine mutengi ari kuda iyo iPhone app. Ndakabvunza vamwe vanhu pa Twitter. Douglas Karr akandipa mareferenzi uye ini zvakare ndaiziva nezve kumwe kutumirwa kubva pane yapfuura hurukuro neimwe shamwari Ndakaenda kune mawebhusaiti emakambani matatu akasiyana uye pakarepo ndakanetseka.
Kambani imwe neimwe yainge iine webhusaiti asi zvese zvaive zvisina kujeka, zvishoma, zvinofinha, kana zvese zviri pamusoro. Ivo havana kana kumbotaura zvakajeka kuti "tinoita iPhone maapplication" uye havana kuratidza chero rakapfuura basa kana screen shots.
Izvo zvakatowedzera kuipa pandakaenda kumapeji avo ekubatana. Handina kuona imwe nhamba yefoni, kero, kana mune dzimwe nguva kunyangwe email kero. Vazhinji vaingova neiri nyore fomu rekutaurirana.
Kunyangwe ini ndaizadza mafomu ekuonana, ndainzwa kunetseka. Aive makambani ari pamutemo here? Ndingavimba navo nemari yemutengi wangu here? Vaizoita basa rakanaka here? Mutengi wangu anoda mumwe munhu wemuno - ivo vakatowanikwa muIndipolis?
Mutengi wangu ikambani inogadzira mamirioni-emadhora uye ini ndoda kukwanisa kuendesa kune mumwe munhu aine chivimbo. Parizvino ndakanga ndisina chokwadi kana ndaive ndawana iyo chaiyo kambani.
Ipapo, ndakawana kumwe kutumirwa paTwitter kubva Paula Henry. Akandiendesa kukambani. Pandakaenda kune webhusaiti yekambani, ndakatengeswa. Heino chikonzero nei:
Ivo vaive ne yakanaka webhusaiti izvo zvinoita kuti vatarise sekambani chaiyo
Vakaratidza chaiko skrini mapfupa ebasa rapfuura
ivo taura zvakajeka zvavanoita: "Tinokudziridza mafomu eApple"
Vari inoshanda pa Twitter uye kuratidza kwavo Twitter hurukuro pawebhusaiti (ndinogona kuvawana kuti vataure navo)
Peji ravo rekubata rine email kero, kero yepanyama, uye nhamba yenhare
Muchidimbu, kambani yakaita kuti zvive nyore kwandiri kuti ndivimbe navo. Ndakafona ndikasiya izwi retsamba uye ndakafonerwa mukati meawa. Ini ndakabvunza mimwe mibvunzo uye ndakadzidza zvakawanda nezve kwavo kwekare basa. Ini zvino ndave kuenda kunoshanda navo kugadzira iyo iPhone app yemutengi wangu.
Mufananidzo waunopa online, meseji yaunotaurirana, uye nyore kwekutaurirana newe unoita mutsauko mukuru kune vatengi vako. Zviitire zviri nyore kuita bhizinesi na.
Tags: udza mashokonhamba yekubatakuonana pejichivandepaula henry
Kuongorora kweBlog: Dave Woodson, Yemagariro Media Mubatsiri